Jimco cabsi badan madaama la waayay hal filim oo 10% xitaa ku furmo | Filimside.net
Home » Box Office » Jimco cabsi badan madaama la waayay hal filim oo 10% xitaa ku furmo
Jimco cabsi badan madaama la waayay hal filim oo 10% xitaa ku furmo
Jimcadan (12 Oct 2018) waxaa lagu tilmaamay Jimcadii ugu xumeyd ee sanadkan 2018 Bollywood-ka soo marto madaama la waayay hal filim oo masraxa ku cusub kaasi oo 10% xitaa ku furmo.
Filimada Helicopter Eela, Tumbbad, FryDay iyo Jalebi ayaa tiyaatarada la wada saaray laakiin nasiib daro hal filim oo dad badan u daawasho tageen ma jiro ama xitaa wax yar oo la dareemi karo Boxoffice-ka ka sameeyay.
Filimka Helicopter Eela oo ay Kajol hogaamiye ka tahay ayaa ugu bilaabasho wanaagsanaa wuxuuna ku furmay 5% xitaa waa bilaabasho midda ugu liidatay laakiin filimada kale ayuu ka roon yahay.
Filimka FryDay oo ay hogaamiyaal ka yihiin Govinda iyo Varun Sharma isaga ka sheekeeyn malahan madaama 2% uu ku furmay waana bilaabasho naxdin ah waayo Govinda sida uu caan u ahaa xili hore iyo maanta sida uu filimkiisa ku furmay waa kaaf iyo kala dheeri!
Filimka Tumbbad oo sheekadiisa aad loo wada amaanay isagana bilaabashadiisa waa mid ay ka muuqato inaysan cidna usoo daawasho tagin madaama uu ku furmay 2%.
Ugu dambeyntii filimka Jalebi ee reer Bhatt maal galiyeen kaasi oo ay wada jilayaan Rhea Chakraborty iyo wiilka fanka ku cusub Varun Mitra isagana xaalkiisa ka sheekeyn malahan madaama uu 2% ku furmay.
Waxaa muuqato filimada masraxa ku cusub dhamaantooda in daawadayaasha iska diideen taasina waxay fursad wacan u tahay filimka Andhadhun ee Ayushmann Khurranni hogaamiye ka yahay todobaadkiisa labaad inuu ganacsi adag sameeyo siina ahaado dooqa kowaad ee daawadayaasha.